Shiinaha Labo-shey oo kuleylinta kuleylinta ah shaashadda shaashadda "Qaabdhismeedka" warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | 名 / 公司 名
Laba-shey kuleylka kuleylka kuleylka shey oo leh "Qaab dhismeed"
Shaxdani waxay ka kooban tahay lakabka aluminium aluminium iyo lakabka keydka. Waxay ubaahantahay mashiinka qalin-gelinta. Ka dib markii mashiinka soo-saarista uu bixiyo shaashadda kuleylka oo si farsamaysan loogu daboolay bushimaha weelka, lakabka aluminiumku wuxuu ku xiran yahay bushimaha weelka oo lakabka labaad (kartoonka qaabka) ayaa lagu hayaa daboolka. Safka labaad sida safka qaybta dambe ayaa looga tagayaa daboolka ka dib geedi socodka kuleylka.
Labo shey oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah oo leh qaab dhismeed
Wax ceyriin: Waxyaabaha Taageerida + Wax + Aluminium Aluminium ah + Filimka Caaga ah + Filimka daboolka
Qalabka Tageerida: Gudiga saxarka ama Polyetylen la balaariyay (EPE)
Lakabka daboolka: PS, PP, PET, EVOH ama PE
Dhumucdiisuna waxay Standard: 0.2-1.7mm
Ballaca Heerka: 9-182mm
Waxaan aqbalnaa astaanta, cabbirka, baakadaha iyo garaafka la qaabeeyey.
Wax soo saarkayagu waa loo dhintaa oo loo kala gooyaa qaabab iyo cabbirro kala duwan marka la codsado.
Heerkulka kuleylka kuleylka: 180 ℃ -250 ℃, waxay kuxirantahay maaddada koobka iyo deegaanka.
Xidhmada: Bacaha balaastigga ah - kartoonnada warqadda - sariirtaada
MOQ: 10,000.00 gogo '
Waqtiga Gaarsiinta: Gaarsiinta Degdega ah, 15-30 maalmood gudahood taas oo kuxiran nidaamka tirada iyo habka wax soosaarka.
Bixinta: T / T Wareejinta Telefishanka ama L / C Waraaqda Deynta
Noocyada Wax Soo Saarka
Aluminium aluminium waa lakabka ugu horreeya ee dhammaan lakabka bireed aluminium.
Lakabka aluminiumku wuxuu ku xiran yahay bushimaha weelka.
Lakabka labaad (kartoonka qaab) ayaa looga tagay daboolka.
Ku habboon xirxirida xirmooyinka PET, PP, PS, PE, dhalooyinka caagga ah ee caqabadda weyn leh
Daboolida kuleylka wanaagsan.
Heerkulka heerkulka kululeeyaha oo ballaaran.
Tayo sare, baxsi la'aan, daloolin ladagaalan, nadiif nadiif ah, sahlid & quwad adag.
Caqabada hawada iyo qoyaanka.
Waqti damaanad dheer
1. Aad u fududahay in la furo
2. Khatimidii ugaarsiga
3. Kahortag daadinta qaaliga ah
4. Iska yaree halista wax-yeelidda, xijaabinta, iyo wasakheynta
5. Kordhi cimrigaaga
6. Abuur shaabad hermetic ah
7. Deegaanka oo saaxiibtinimo leh
Waxyaabaha saameynaya shaabadaynta
Baaxadda xiriirka ee dusha wax lagu xirto: inta balaaran ee xiriirka udhaxeeya dusha sare iyo goomaha ama xirxirida, waxaa sii dheeraanaya dariiqa dheecaanka dheecaanka iyo luminta caabbinta qulqulka, taas oo faa'iido u leh shaabadaynta. Si kastaba ha noqotee, isla xoog isku-uruurinta, ballaca ballaca xiriirka, wuu yaryahay cadaadiska gaarka ah. Sidaa darteed, ballaca xiriirka habboon waa in laga helaa iyadoo loo eegayo maaddada shaabadda.
Waxyaabaha dareeraha ah: dareeraha dareeraha ayaa saameyn weyn ku leh waxqabadka xirmidda xirmada iyo goomaha. Dheecaanka leh isku-dhejiyeyaasha sarreeya waxay fududahay in la xidho sababtoo ah dheecaankiisa oo liita. Dareeraha dareeraha ayaa aad uga badan kan gaaska, sidaa darteed dareeraha ayaa ka fudud in la shaabadeeyo gaaska. Uumiga cufan ayaa ka fudud in la xidho marka loo eego uumiga kulul sababta oo ah way isku ururinaysaa isla markaana soo deyneysaa dhibcaha waxayna xireysaa kanaalka qulqulka inta u dhexeysa dusha sare. Markay sii weynaato mugga molikiyuulka ee dareeraha, ayay u fududahay inay ku xirnaato farqiga dhuuban ee cufnaanta, markaa way fududahay in la xidho. Qoyaanka dareeraha ee walxaha xirashada ayaa sidoo kale xoogaa saameyn ku leh shaabadaynta. Dareeraha ay fududahay in la qoyo waa fududahay in la daadiyo iyadoo ay ugu wacan tahay ficillada kala-baxa ee daloolada yaryar ee ku jira goomaha iyo xirxirida.
Hore: Hal-xabbad oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah oo leh Filimka 'White PE Film'
Xiga: Laba-xabbadood oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah oo leh lakabka warqadda
Qaad 'N' Peel
Hal-xabbad oo kuleylinta kuleylinta kuleyliyaha xariiqa leh Safka
Hal-xabbad oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah ee lakabka Khatarta leh Caddaan ...
Hal-xabbad oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah ee daboolaya gudaha ...
Laba-xabbad oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah ee waraaqda leh ...
Feeraha Feejignaanta Fudud ee Fududeynta Qalabka Aluminium